Galbashada Ilayskii Ifka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Sidee Baan u Noqon Karaa Qof Naftiisa ku Kalsoon?
Cabdifataax Xasan-Barawaani — August 28, 2020
Habeen baxsan oo naruuro badan, dadkuna wada faraxsanyahay, waayeelkuna kolkaas uun ardaaga ku hoydeen. Doobabkii iyo gaashaantimooyinkiina ay daafaha ardaayada ku jalbeebtamayaan ayuu ahaa. Saxansaxo udgoon oo aad u caraf badan, ayaa dadka intii dibadda ardaayada joogtey ay sanka la raac-raacayeen.
Maanta galabtii waxa yeelku tilmaamayey saansaanta roob gudgude ah, oo deegaanka miri doona saqda dhexe. Illaa iyo kolkii cadceeddu godka kusii galbanaysey, waxa is qabsaday heelimaadka roobka soo onkodaya, iyo iftiinka cadceedda ee sii galbanaya.
Dhammaan dadka deegaanku, waxa ay moogganba u henganayeen gudgude lagu qabowsado, oo aan beryahaa ku di’in. Nabad lagu caano maalay ayaa ka jirta deegaanka meelo badan oo kamid ah, se gulufyo dagaal baa deegaanno jaal iyo jaarba la ah ka socda. Kuwaas oo ay isku haleeleen ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Amisom. Waxaana aad looga itaal roonaaday kolkaas Al-Shabaab, oo deegaanno dhawr ah laga fara maroojiyey.
Habeenkaas, waxa deegaanka ardaa kamid ah ku foolaneysay, oo aad u xanaf wareeraysey hooyo Batuulo. Waa la sugay, oo la sugay waxaana lagu ducaysanayey “Allow kala nabad keen”. Goor ku siman labadii habeennimo, ayaa ay ummushey gabadh. Isla durbadiiba roobkii gudgudaha ahaa ee galabta la saadaalinayey, ayaa ku bilaabmay deegaankii. Farxad iyo rayn-rayn ayaa lagu qaabilay. Batuulo odeygeedii Samatar, oo kolkaas uun kobta soo istaagey, baadi-goobna ugu jirey neef ka lumay, ayaa gabadhii u dhalatey caawa lagu taabtey warkeeda.
Samatar aad buu ugu ugu riyaaqay naxariistaas Eebbe iyo gabadhaas la isugu beegay, isagoo dhoolacaddeynaya ayuu kor u yidhi: “CAAWA WAA HABEEN BAXSAN, MAHADDAA EEBBOW ADAA LEH!” Waxa uuna u sheegay intii jaarka ahayd ee ardaaga fadhiday in gabarta u dhalatey uu u bixiyey “Baxsan”.
Dhammaan dadkii kalena waa la qaateen magacaas bilan in gabarta loo bixiyo. Roobkii kolkii uu cabbaar maasheeyey deegaankii, ayaa dadkii jaarka ahaana ka huleeleen ardaagii reer Samatar, oo ardaayadoodii ku hoydeen. Aroortii waxa is qabtay roobkii xalay miray deegaanka, oo carro san ah iyo iftiinka qorraxda ee oogta waaberi. Ramad dhaley caanihiisii baa hadhuubyo laga dhamay, deedna qof kastaa waxa uu abbaaray halkii hawl ama hadal ka xigey.
Baxsan waxa ay noqotey bilicsan ku soo biirtey reerka. Muraayad la isku daawado, oo Eebbahay dhaban iyo dheeh saafi ah ku galadeystay. Deegaankii ay ku dhalatey ee Far libaax, oo hoos taga degmada Beled Weyne, ayaa laga wada jeclaadey. Kolkay kacaantay oo gabadh dhoocil ah noqotey, aabbeheed Samatar cabsi xooggan baa soo food saartey.
Waxa uu ka cabsi qabey haddii Baxsan ay waxoogaa ugu darsanto da’dan hadda ee lix jirka ah, in laba waddo oo mid walba ay tahay dhabbo halaq ay u qorsheysatantahay. In ururka Al-Shabaab ay qasab ku guursadaan, iyada oo da’da intaas ah jirta, ama in dhibaato xooggani ka soo waajahdo ciidamada Amisom, oo tacaddiyo aan loo aabbo yeelin ku haya deegaanka.
II: Muddo kaddib, kolkii ay Baxsan noqotey toban jir waxa maalin maalmaha kamid ah booqasho ku timid deegaanka habaryarteed oo degan Beled Weyne. Markay aragtay Baxsan, oo kortay waxa ay walaasheed Batuulo iyo seeddigeed Samatar ka codsatey in loo oggolaado in magaalada Beled Weyne ay la degto, oo halkaas dugsi kaga darto iyadana lagu ogaado.
Samatar iyo Batuulo markay arrintaas ka fikireen, oo isla kaashadeen waxa ay go’aan ku gaadheen in taladaas ay oggolaadaan. Sidaasna Baxsan ay ku raacdo habaryarteed.
Muddo labo sanno ah kolkii ay dhiganeysay dugsigii, waxa ay labadii sannaba u gashey kaalintaa koowaad. Taas oo gabdho iyo wiilalba u riyaaqeen dadaalkeeda aan kala go’a lahayn. Waxa ayna arrintaasi horseedday in loo gudbiyo fasalka afraad, oo laga boodsiiyo fasalka saddexaad.
Fasalkii afraad ayay u gudubtey waxa ayna noqotey ardayda ugu horreeya ee fasalkeedaas cusub. Markii uu dhammaadey sannad dugsiyeedkii, oo ayna dhammeystay dugsigii hoose, una gudbi rabto dugsi dhexe ayaa waxa ay damacday in deegaankeedi ay booqato, waalidkiina soo aragto, oo ku soo indho doogsato.
Samatar isagoo naxsan, oo anfariirsan misena jareyanaya ayuu ku hoyday ardaagiisii. Aroortiina waxa uu u sheegay gabadhiisa in aysan u soo bixin bannaanka, oo aaanay dhacanta soo dhaafin. Wuxuuna u sheegay in uu u hayaamayo halkaas iyo maqaaxiyii tolka. Balse, uma uusan sheegin halka uu tegayo iyo in raggii ururku ay ballamiyeen. Duqii waxa uu tagey kobtii lagu lahaa kaaley ee shuuro iyo wilaayada lagu sheegayey. Reerkiisii ayaa dib loo diwaangeliyey,waxaana liiska lagu darey gabadhiisa Baxsan ee u timid.
Waxaana Samatar loo sheegay in amiirka guud ee wilaayada qeybtan Far libaax uu damcey guurka Baxsan, sidaas darteed salaadda duhur in uu ku soo tukado masjidka. Halkaasna looga wada xaajoon doono arrinka guurka.
Samatar waxa uu kobtii kala dhaqaaqay rejo xumo, cabsi, naxdin iyo anfariir ku habsadey ilayskii ifka ee u bidhaamay, taas oo ahayd gabdhiisa mustaqbalka ifaya uu la rabey. Ardaagiisii kolkii uu ku noqdey, goor barqo ah waa ku dhici waayey in uu xaaskiisii Batuulo iyo gabdhiisii yareyd ee Baxsan uu arrinka la wadaago. Aamusni, gacmaha iyo dhabannada oo isku dhega ayaa salaaddii duhur loogu eedaamay. Dabadeedna, isla duhurkiiba waxa deegaankii ka da’ay roob geel dooje ah.
Markii uu qaadayna, ee reerkiina hadhimeystay ayaa uu Samatar dhinaca yara dhigay ardaaga. Isagoo ka fikiraya hoogga iyo hagardaamada ku soo food leh gabadhiisa qaryadda ah, ee aan loo quudhi karin bahalladan afka duubtay.
Amiirkii: Horta adeer Samatarow dad Muslimiin ah ayaynnu nahay. Ilaahayna waxa uu ina faray wanaagga bulshada Muslimka in laga taliyo mar walba. Guurkuna wanaagga bulshada waa kuwa ugu horreeya. Waa raxmad, waa risiq, waa nimco, waa mawadda, waa waa….!! Sidaas oo ay tahay, gabadhaa qaryadda ah ee karti iyo wanaagba meeshii ugu sarreysay Eebbe ku manneystay ayaad iga qarisey. Waa dembi weyn oo aad ka gashey amiirka! Ciqaab ayaa kugu waajibi lahayd, haddaanan kuu tudheyn.
Balse, waan kaa xishooday. Dharka oo lagaa siibo, bulshadana la isugu yeedho deedna hortooda shaabbuug lagula dhaco ayay ahayd. Waan se ku cafiyey dar Alle Xaajiyow. Immikana, waxaan rabey inaad gabadhaada Baxsan i siisid, hadalna adoon ka soo celinin. Sidaasna ay ku noqoto sawjatii al xalaala bi nikaaxin muwaafaqu bi shariicatil Islaam lil amiir!!
VI: Baxsan oo ardaaga xaggiisa dambe taagneyd ayaa maqleysay hadalka ay is dhaafsanayeen labadeeda waalid, ee muranka iyo khilaafka ay ka dareemayso. Waana ay maqleysay in amiirka wilaayada uu aabbaheed siiyey. Oohin ayay qabsatey, ilinta ayaa ka dareertay dhabannadeedii aan weligeed biyo mooyee aanay ilin dhanaani qoynin. Qalbiga ayaa holac iyo dhimbiilo aad u xanuun darani kaga bilaabmeen. Waxa ay ku celcelinaysaa hadal qoomamo iyo shalleyto ah
“Alla maxaa i keenay tuulo baastan, miyaan filanayey musiibadan maanta igu habsatey? Ma anoo intaas le’eg baa nin la isiiyey, bal maxaa ii mustaqbal ah immika waa tane?”
Kolkii la gaadhay galabtii ayuu duqii Samatar ahaa inta uu weysada boobey, hore u gaadhay masjidkii wilaayada ee lagu ballansanaa. Afar oday oo ay tol yihiinna maqaaxi wilaayada u dhaweyd ayuu ka sii kaxeystay, oo arrinkana uu la wadaagay. Masjidkii kolkii salaaddii laga baxey, ayaa la habeeyey, wax jidiinka la mariyana lagu sharraxay, oo aan sidaas u sii badnayn.
Furfurasho iyo salaan kaddib, waxa waddaad xarakada Al-Shabaab kamid ahaa isu meheriyey gabadhii aan guurka oggoleyn, oo aabbaheed oo isna la jujuubey wakiil loo dhigay iyo amiirkii deegaanka Far libaax. Waxaana lagu soo gebagabeeyey baarakallaah lakum, wa jamaca baynakumaa fil khayr wal khayr….. illaa shafka la isa saaray. Dhawr kiish oo lacag laga soo buuxiyeyna shantii odey ayaa cumaamadda loogu laabey.
Weligeed isma odhan nin aanad jeclayn ayaa aqal laguugu xareyn doonaa, misena aad kaaga da’weyn. Dhegaheeda waxa intii la gelbinayey aad uga batey islaamaha jaarka ee ku leh
“Hooyo farax, maxaa ku haya ee aad afka la buureysaa? Naag ninkii dhali kara ayaa dhaqi karee? Ilaahay ugu mahadnaq sawjka aad heshay, hadduuba ku doortey amiirka wilaayadeennu? Waxbarasho waxba kuu tarimayso, kolleyba naag guri sugeysa ayaad ahayd. Haddana calafkaagii ayaa kuu yimide gacanta qabso oo hore ka raac…”.
Hadalladaasi waxa ay qalbigii holcayey ee Baxsan ku noqdeen sidii baatrool loogu sii darey oo kale, oo holacii ayaa holac ugu darsamey, murugadiina u laba jibbaamatey!
Kolkii salaaddii cishe laga baxey, ayaa amiirkii oo xabaasuud lagu darey xulbad iyo xildiid soo cabbey uu u soo galey. Urtaas soo kaaheysa ayay marada sanka saaratey Baxsan. Isagoo ka xanaaqay in ay sanka ka qabsatey, ayuu si qeylo leh ugu yidhi:
“MA SAWJKAAGA XAALASHA AH AYAAD SANKA KA QABSANEYSAA? Alle ka cabso ukhtii fil islaam!” Kolkii uu dharkii la baxey, ayay ku dhici weydday in ay eegto Baxsan. Oo miyay eegi kartaaba, ma wax la eegaa dadqalkani?!
Wixii cadaabkaas iyo ciilkaasi nolol maalmeed u noqdo Baxsan, ayaa muddo ka soo wareegtay. Laba sanno kaddib, iyadoo muuq ahaan iyo maan ahaanba is beddeshay. Dil joogto ahna uu amiirku habeen kasta iyo kol kasta oo ay amar diiddo sameysaba uu la dul taagnaa. Ayaa goor barqo ah deegaankii Far libaax ay weerar ku soo qaadeen ciidamadii Amisom.
Dhammaan xeryihii iyo deegaannaddii ku hareeraysnaa Far libaaxna ay Amisom hore gacanta ugu soo dhigtay, ayaa Far libaaxna la isku haleelay goor barqo ah, dagaal aad u qadhaadh oo meydka iyo dhaawaca labada dhinacba uu tiro beelay ayaa ka dhacay kobtaas. Libintiina waxa heshay Amisom, oo si gaadmo leh hub iyo saanad culusna sidata ay kula dul dhacday Al-Shabaab. Amiirkii iyo laba guuto oo uu watana waxa ay firxadkii galeen deegaanno ka tirsan shabeellada dhexe.
Qeybtii caafimaadka u qaabilsaneyd Amisom iyo hay’adihii kaleba waxa ay Baxsan iyo hablihii yaryaraa ee uurka lagu helay, oo dhan ku amreen in ay toddobaad kasta tagaan xeryaha caafimaadka ee bilaashka ah. Kuwaas oo ay maamulaan ciidamada Amisom. Si loola socdo xaaladdooda caafimaad iyo halka ay mareyso.
Baxsan waxa la soo dersay dhibaatooyin ka badan intii hore, hadda waa laba qof oo isku dul nool. Waalidkeed meel ay kaga warranto garanmayso, asxaab ma jirto, tol iyo tolane toona meel kuma oga. Waa gabadh yar oo 15-sanno ah. Mustaqbalkeedii lagu dheelay, diihaalka iyo darxumada ka muuqata aan la maleysan kareyn.
Madaxa ayay ka soo riddey teendhada inta hore, deedna waxa arkay sarkaalkii saaka aroortii la joogey. Inta uu turjumaankii Soomaaliga ahaa soo kaxeystay ayay mar labaad u soo galeen Baxsan. Inta ay isku yax yaxdey, ayay mid kamid ah go’yaashii cadcaddaa ee sariirta ku goglanaa isku qarisay. Deedna sarkaalkii oo qoslaya, aadna ugu jees jeesaya ayaa u soo dhawaadey deedna hadallo afka ingiriisiga ah ayuu kula hadlay. Kii Soomaaliga ahaa ayaa u turjumay kuna yidhi:
“Wuxuu ku yidhi maxaad isla qarineysaa, maanta oo dhan baan ku daawanayee, kaana dhergee!”.
Kolkii ay intaa maqashay ayaa Baxsan wadnuhu go’ay. Oohin iyo baroor ayay bilowday. Dhulka ayay isla dhacdey, iyadoo ku qelinaysa hadallo ay ku canaananeyso tujumaankan ay dhiigga la wadaagto, misena sarkaalkan daba dhilifka u ah, waxa ayna ku cataabeysay
“Damiir laawe ayaad tahay, ma walaashaa ayaa cadowga loo jebiyaa? Miyaan gabadh kula dhalan? Damiirkii xagguu kaa aaday? Naxariistii walaalnimo aaway, miyaanad Soomaali ahayn?” Turjumaankiina uma jawaabo, ee isaga iyo sarkaalkii ayaa qosolka isugu jiibiya sida ciyaartii jaan dheerta iyo dhaantada.
Si kedis leh ayay u tuseen Baxsan muuqaal ay ka duubeen, iyada iyo ninka sarkaalka ah wixii saaka uu ku sameeyey. Way Naxday! Oo afka gacanta saartay, oo iyadoo ooyeysa jilbaha qabsatey wiilkii turjumaanka ahaa. Iyadoo ka codsaneysa in uu ka tirtirto, oo sharafteeda u ilaaliyo. Wuxuuna ku yidhi:
“Haddii aad rabto inaan la baahin muuqaalka, waa inaad mar kasta oo sarkaalkan iyo kuwo lamidka ah kuu baahdaan aad oggolaataa. Haddii kale muuqaalkan ayaan baahinayaa, oo dhammaan dadka deegaanka iyo adduun weynaha tusayaa”.
Iyadoo oo jareynaysa ayay “Waayahay” ku soo koobtay warraaqeedii. Waddo kale oo aan taas ahayn uma bannaanyn. Markanna, sidii ay guurka amiirkii u oggolaatey ayay mar labaad falkan aadka u liitana u oggolaatey. Baxsan sidii ay biyaha iyo gasiinkaba u soo doonan jirtey aroor kasta ayay kol kasta oo saraakiisha Amisom u baahdaanna ugu timaaddaa, oo sidii la doono ay ka yeelaan. Mustaqbalkeedii god ayuu ku dhacay, jid iyo jiho ay ka baxdo garanmayso.
Murugo iyo diihaal uma reebbana! Indhihii waa qalaleen oo ingageen sidii oohintu uga socotey. Cidla’ iyo ciirsila’ ayay noqotey Baxsan. Waxa ay dharaar uun rajeynaysaa iyada iyo kumanaanka lamid ahiba, in ay cadaabtan ka baxaan oo loo gargaaro lana samata bixiyo.
Halkan kala deg sheekada oo dhammeystiran: https://abdifatahbarawani.files.wordpress.com/2019/09/galbashada-ilayskii-ifka.pdf
Tags: Galbashada Ilayskii Ifka
Next post Wareysigii Madaxweyne Farmaajo ee 10-kii Febraayo 2020
Previous post Falanqeyn: Nabadgelyada Soomaaliya
About the Author Cabdifataax Xasan-Barawaani
Cabdifataax Xasan Maxamed (Barawaani), waa qoraa iyo cilmi-baadhe. Waxa uu wax ka qoraa arrimaha siyaasadda, amniga, arrimaha bulshada, taariikhda iyo afka. Waxa uu wax ka bartaa dalka Ugaandha (Kambaalla), gaar ahaan kulliyadda diblomaasiyadda iyo xidhiidhika caalamiga ah. Waa maamulaha iyo tifaftiraha guud ee mareegta Indheergarad. Waxa kale oo uu ka mid yahay qorayaasha majalladda Afrikaan-so.